Kungani UNkulunkulu Evumela Ukuba AmaKristu Ahlupheke? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Izivivinyo Nokucwengisiswa Kuwumusa KaNkulunkulu Omkhulu
Lokhu kusikhombisa ukuthi izivivinyo nokucwengisiswa empeleni kuwuthando lukaNkulunkulu oluyiqiniso kithi nolwangempela. Kungalokhu kuphela ukuba sihlanzwe futhi sisindiswe nguNkulunkulu, ngaleyo ndlela sibe ngabantu abahambisanayo nentando kaNkulunkulu. Yilesi isizathu esenza uNkulunkulu avumele lezi zinto ukuba zisehlele.
Imvamisa, asinakho ukuqonda izinhloso zikaNkulunkulu ezinhle, ngako siye sethembe ukuthi izinto zizohamba njengoba sifisa. Asizimisele nhlobo ukudlula ezivivinyweni nasekucwengisisweni. Kunalokho, sethemba ukuba nempilo enokuthula engenazinhlekelele ezimpilweni zethu noma ezimpilweni zalabo esibathandayo. Sifuna ukuba konke kuhambe kalula, nokuthokozela izibusiso nomusa kaNkulunkulu. Kodwa ingabe sike sicabange ukuthi isimo esinethezekile singenza na ukuthi silahle izimo zethu ezikhohlakele? Zingakwazi yini izibusiso eziphathekayo ukusisiza ukuba sazi isimo nobunjalo bukaNkulunkulu? Uma sithokozela kuphela isihawu nomusa Wakhe, ingabe lokho kungalwandisa ukholo lwethu Kuye bese kusivumela ukuba sibe nothando lweqiniso nokuthobela uNkulunkulu? Amazwi kaNkulunkulu athi, “Uma uthokozela umusa kaNkulunkulu kuphela, unempilo yomndeni enokuthula noma ukubusiseka ngezinto eziphathwayo, lapho-ke awukamtholi uNkulunkulu, futhi ukukholwa kwakho kuNkulunkulu ngeke kuthiwe kunempumelelo. UNkulunkulu usevele uwenzile umsebenzi wesiqephu esisodwa womusa enyameni, futhi usevele wathululela izibusiso zezinto eziphathekayo phezu komuntu—kodwa umuntu akakwazi ukupheleliswa ngomusa, uthando, nesihawu kuphela. Lokho umuntu ahlangabezana nakho kunengxenye ethile yothando lukaNkulunkulu, kumenza abone uthando nomusa kaNkulunkulu, kodwa ukuthola lokhu isikhathi esithile, uyabona ukuthi umusa kaNkulunkulu nothando lwaKhe kanjalo nomusa akukwazi ukwenza umuntu apheleliswe, futhi akukwazi ukuveza lokho okuyinkohlakalo phakathi kumuntu, futhi akukwazi ukuqeda isimo somuntu esikhohlakele, noma ukwenza uthando nokholo lwakhe lupheleliswe. Umsebenzi kaNkulunkulu womusa kwaba umsebenzi wesikhathi esisodwa, futhi umuntu akakwazi ukuncika ekuthokozeleni umusa kaNkulunkulu ukuze azi uNkulunkulu” (“Ukubhekana Nezilingo Ezibuhlungu Kuphela Okungakwenza Wazi Ubuhle BukaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni).
Amazwi kaNkulunkulu athi, “Lapho ubhekene nokuhlupheka kumele ukwazi ukungacabangi ngenyama futhi ungakhonondi ngoNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu ezifihla kuwe, kumele ukwazi ukuba nokholo lokumlandela, uphinde ube nothando owawunalo ekuqaleni, ungaluvumeli lube ntekenteke noma lunyamalale. Ngisho ngabe uNkulunkulu wenzani, kumele uthobele uhlelo Lwakhe, ukulungele ukuqalekisa inyama yakho kunokukhononda Ngaye. Lapho ubhekene nokuvivinywa, kumele wanelise uNkulunkulu, ngisho ungakhala kabuhlungu noma ube nokunqikaza ukwehlukana nento ethile oyithandayo. Yilokhu kuphela okungabizwa ngokuthi uthando nokholo lweqiniso. Kungakhathalekile ukuthi isimo sakho sangempela siyini, kumele uqale ube nokuzimisela ukubekezelela ubunzima futhi ube nokholo lweqiniso, futhi kumele uzimisele ukudela inyama. Kufanele uzimisele ukubekezelela ubunzima nokulahlekelwa izinto ozithandayo ukuze ufeze intando kaNkulunkulu. Kumele uphinde ube nenhliziyo yokuzisola: Esikhathini esidlule awukwazanga ukwanelisa uNkulunkulu, futhi usuyazisola manje. Akufanele untule nokukodwa kulezi zinto—uNkulunkulu uyokuphelelisa ngalezi zinto. Uma ungayigcine le mibandela, khona-ke awunakupheleliswa” (“Labo Abapheleliswayo Kumele Bacwengwe Kuqala” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni).
Ngase ngithandaza kuNkulunkulu ekufuneni, futhi ngafunda la mazwi avela Kuye: “Baningi kakhulu abakholwa Kimi kuphela ukuze ngibaphilise. Baningi kakhulu abakholwa Kimi kuphela ukuze ngisebenzise amandla Ami ukuba ngixoshe imimoya engcolile emizimbeni yabo, futhi baningi kakhulu abakholwa Kimi ukuze nje bamukele ukuthula kanye nenjabulo Kimi. Baningi kakhulu abakholwa Kimi ukuze kuphela bafune Kimi ingcebo eningi kakhudlwana. Baningi kakhulu abakholwa Kimi ukuze bachithe lokhu kuphila ngendlela enokuthula futhi ukuze balondeke futhi baphile kahle ezweni elizayo. Baningi kakhulu abakholwa Kimi ukuze bagweme ukuhlupheka esihogweni futhi bamukele izibusiso ezivela ezulwini. Baningi kakhulu abakholwa Kimi ukuze bathole ukunethezeka kwesikhashana, kodwa abafuni ukuzuza lutho ezweni elizayo. Ngesikhathi ngiletha intukuthelo phezu komuntu futhi nginqamula yonke injabulo kanye nokuthula ake waba nakho kwasekuqaleni, umuntu wabe eseba nokungabaza. Ngesikhathi nginika umuntu ukuhlupheka kwase sihogweni futhi ngimphuca izibusiso zase zulwini, ihlazo lomuntu laphenduka intukuthelo. Ngesikhathi umuntu ecela ukuba ngimphulukise, angimnakanga; umuntu wasuka kimi ukuze kunalokho afune indlela yemithi emibi nokuthakatha. Ngesikhathi ngithatha konke lokhu umuntu ayekade ekufune Kimi, bonke banyamalala bahamba bashona. Ngalokho, Mina ngithi umuntu unokukholwa Kimi ngoba ngenzelana umusa omkhulu, futhi kuningi kakhulu okuyinzuzo” (“Yini Oyaziyo Ngokukholwa?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni).
Okwedlule: Ingabe Uyazazi Izindlela Ezimbili UJesu Kristu Azobuya Ngazo?
(1) Umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ezinsukwini zokugcina wenzelwa ukuhlanza, ukusindisa kanye nokuphelelisa umuntu, kanye nokwenza iqembu laban…
UShi Han Esifundazweni SaseHebei Ngazalelwa emndenini ompofu wabalimi. Ngangihlakaniphile kusukela ngisemncane, kangangokuthi ngangingalwi nezinye izi…
UZhao Xia Esifundazweni saseShandong Igama lami nginguZhao Xia. Ngazalelwa emndenini ojwayelekile. Ngenxa yezisho ezifana nalezi “Umuntu uzenzela igam…